Zazavavy 11 taona nanomboka fanangonantsonia fitakiana ny fialàn’ny filoha meksikàna · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Eduardo Avila
Voadika ny 16 Desambra 2019 2:06 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , English, македонски, Português, Français, polski, Español
Pikantsarin'ny sonian'ireo olona maniry ny hametrahan'i Peña Nieto fialàna, fanentanana natao tao amin'ny sehatra Change.org.
Tsy voatokana ho an'ny tanora sy ny lehibe irery ihany ny fikatrohana politika. Noporofoin'i Sofia izany, zazavavy kely 11 taona nanapaka hevitra ny hanangona sonia mitaky ny fametraham-pialàn'ny filohan'ny fireneny, Enrique Peña Nieto. Ireto ny antony arosony.
Tsy novalian'i Peña Nieto araka ny tokony ho izy ny fanontanian'ny fianakavian'ireo mpianatra nanjavona, lasa izy nankany Shina, toerana ananany trano iray mitentina 80 tapitrisa pesos (5,88 dolara eo ho eo)
Niteraka fanehoankevitra miabo marobe ity hetsika santatra nataony ity. Ohatra, Ny sasany nanapaka hevitra ny hanao sonia mba hanaporofoana amin'i Sofia sy ireo ankizy meksikàna hafa (ary hatramin'ireo olondehibe aza) fa mbola azo atao tsara ny manana firenena tsara kokoa, ary ho fampahatsiahivana ireo eo amin'ny fitantanana fa ny vahoaka no nametraka azy ireo teo ary azon'ny vahoaka atao ny manaisotra azy ireo eo. Hoy ny renin'i Sofia:
Tsy haiko ny hoe fomba ahoana no hanaisorana filoha iray. Saingy, antenaiko fa azo atao ny mandefa ireny taratasy ireny any ho any mba hahatsapan'i Sofia fa nilaina ilay ezaka nataony, ary dia nandramanay tamin'ny fomba rehetra. Tsy vitako ny nanakana azy tsy hanao izany, satria tena azo noeritreretina ihany ny hahatanterahany. Tsy azoko tapahana ny elany. Feno hery ombam-pinoana sy fahavononana ity andian-taranaka ity, ary miaraka amin'ny fotokevitry ny atao hoe mendrika, zavatra iray izay irian'ny rehetra ho azo mandritry ny faran'ny herinandro iray
Napetraka tao amin'ny Change.org ilay fanangonantsonia ary efa nahazo 10.500 sahady tamin'ny fotoana nivoahan'ity lahatsoratra ity tamin'ny teny anglisy.